समाचार बालकोटमा झडप, तीन घाईते, पुलमा भेटिएको बम निष्कृय
Ujyaalo शुक्रवार, मंसिर २२, २०७४ ००:३५:००
भक्तपुर, मंसिर २१ – भक्तपुर क्षेत्र नं. २ को सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ३ बालकोटस्थित गणेश प्रा.वि. केन्द्र आसपासको क्षेत्रमा झडप भएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबिच विवादका कारण भएको झडपमा तीनजना घाईते भएका छन् । घाईतेको मध्यपुर अस्पतालमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मतदान भईरहेको स्थलमा एमालेका कार्यकर्ता आएर विवाद गरेको कांग्रेसका प्रतिनिधीले आरोप लगाएका छन् भने कांग्रेसले विवाद निकालेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
झडप भएपछि विवाद गर्ने पक्ष बिच भागदौड भएको र रोज भिलेज अगाडि दुबै पक्षबिच ढुङ्गा हानाहान भएको प्रतक्ष्यदर्शीले बताएका छन् । कांग्रेसका प्रतिनिधीले एमालेले कांग्रेसको क्षेत्रमा आएर ढुङ्गा हानेर घरको सिसा फुटाएको आरोप लगाएको छ भने एमालेले कांग्रेसका कार्यकर्ताले ढुङ्गा हानेको आरोप लगाएको छ ।
ढुङ्गा हानाहानबाट रोज भिलेज आसपासका क्षेत्रमा करिब १५ वटा घरको सिसा फुटेर क्षति पुगेको छ भने त्यहाँका बासिन्दा आतंकित बनेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिषर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईले विवादित क्षेत्रमा मतदान स्थगित नभएको र मतदान जारी रहेको बताउनुभयो ।
ढुङ्गा हानाहानबाट घरको सिसाहरुमा क्षति पुगेको जानकारी दिदै उहाँले घट्नास्थलमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको बताउनुभयो । स्थिति सामान्य भएको प्रहरीको भनाई छ ।
यता मध्यपुरथिमि नगरपालिका कौशल्टार र सूर्यविनायक नगरपालिका बालकोट जोड्ने पुलको तल बम भेटिएको छ । नेपाली सेनाको टोलीले बमलाई निष्कृय पारेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।